व्यक्ति असफल किन हुन्छ ? - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips व्यक्ति असफल किन हुन्छ ?
व्यक्ति असफल किन हुन्छ ?
हामीले आफ्नो कमी-कमजोरी पत्ता नलागाउने तर समय र परिस्थिति, भाग्यलाई असफलताको दोष दिने गरिरहेका हुन्छौं।
सपना देख्ने मानिसले आफूले विजय हासिल गरेको सपना देख्छ र त्यो वास्तविकतामा बदलियोस् भन्ने ऊ चाहन्छ। त्यसैले त्यो सपना पूरा गर्नको लागि उसले जीवनमा लक्ष्य निर्धारण गर्छ र सफलतातिर लम्किन्छ। सपना नदेख्ने व्यक्तिको जीवनमा कुनै निश्चित लक्ष्य हुँदैन, जसले गर्दा सफलता संग उसको दूरी कायम भइराख्छ।
आवश्यकता अनुसार छिटो निर्णय लिन नसक्ने व्यक्ति पनि सफल हुँदैन । अवसर आगाडी आएको बेलामा उसले धेरै सोंच्न थाल्छ, समाज, साथीभाई, परिवार सबैको कुरा सुन्न थाल्छ र आफूले निर्णय लिन सक्दैन भने छिटो काम सुरु गर्न सक्दैन। जसले गर्दा उसले त्यो अवसर गुमाउँछ र सफलताको सम्भावना पनि हातबाट फुस्किन्छ।
आफ्नै कुरा र हठमा मात्र निर्णय लिने व्यक्ति पनि असफल हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना वरिपरिका व्यक्तिहरुको कुरा सुन्नुपर्छ, तर त्यसमै समय व्यतित गर्नु हुँदैन। उनिहरुको कुरालाई विश्लेषण गरेर , समयको पावन्दीलाई बुझ्दै आफैले निर्णय लिनुपर्छ।
अरुबाट सिक्नुपर्छ । तर अरुको नक्कल गरेर काम गर्ने मान्छे केही समय राम्रै गर्न सके पनि अगाडी बढ्न सक्दैन। किनकी नक्कल गरिएका कुराहरुमा सिर्जनात्मकता हुँदैन।
कुनै पनि व्यक्ति सफलता प्राप्त गर्नको लागि एकै ठाउँमा बसिरहनुहुन्न । यदि व्यक्तिले एउटा कुरामा सफलता हासिल गरेपछि पनि त्यो भन्दा अगाडी नबढेर त्यही काममा मात्र बसिरहन्छ भने ठूलो सफलता गुमाउँछ। ठूलो सफलताको लागि रोकिनुहुन्न, एक पछि अर्को पाइला अगाडी बढाइरहनुपर्छ।
बुझाइको कमी, कामबाट बाहना बनाउने गर्नाले पनि व्यक्तिको असफलता हुने सम्भावना बढी हुन्छ। कुनै अवसरको सतही विश्लेषण गर्ने, आफूले गरिरहेको कामले दिएका बेफाइदा र बेफाइदा नबुझ्ने गर्नाले पनि व्यक्ति असफल हुन्छ ।
दुरदृष्टिको कमीले पनि मानिस सफल हुन सक्दैन । काम गर्ने व्यक्तिले भविष्यका अवसर, चुनौती र भोली आफू कुन ठाउँमा हुनेछु भन्ने अनुमान गर्नसक्ने हुनुपर्छ।
कोही पनि व्यक्तिले काम सुरु गर्ने बित्तिकै ऊ सफल हुँदैन । काम सुरु गरेपछि असफलताहरु पनि आउँछन्। एक/दुई असफलताबाटै हार मान्ने व्यक्ति सफल हुन सक्दैन। सफलताको लागि ती असफलताहरुबाट पाठ सिक्दै अगाडी बढ्नुपर्छ।
सफलता भनेको धन मात्रै होइन । धन मात्र कमाउन खोज्ने व्यक्ति सफल हुन सक्दैन । सफलता प्राप्त गर्नको लागि त्यो कामले धन, सामाजिक समृद्धि, आत्मसन्तुष्टी, इज्जत सबै दिनुपर्छ । त्यसैले सफलता प्राप्त गर्ने बाटो लामो हुन्छ।
Previousकथा : छोटो बाटो
Nextकरोडौं कस्तूरी : अन्त्यअघि